Ampidino Office 2013 ho an'ny Windows
Ampidino Office 2013
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (0.48 MB)
Ampidino Office 2013,
Microsoft dia nanambara ny Microsoft Office 2013, ny andiany faha-15 anny Microsoft Office, izay antenaina miaraka aminny Window 8. Nanontany tena izahay hoe ahoana no hiafaranny Office 2013 aminny fivoaranny taranaka vaovao. Manokana, ny zava-misy fa ny Windows 8 dia hahazo tombony aminny interface Metro no mampiavaka ny Office 2013.
Sintomy ny Microsoft Office 2013
Ny programa birao vaovaoni Microsoft Office 2013 dia mitondra zava-baovao maro. Office 2013, voaomana aminny alàlanny fampiasana ireo fitahiana rehetra aminny interface Windows 8 Metro, dia mivoaka miaraka amina interface tsotra kokoa sy ilaina kokoa. Indrindra indrindra noho ny interface fanavaozana azy, mpampiasa maro no afaka mampiasa rindrambaiko Office mora foana.
Maniry ny fahatsorana ho lohahevitra tato ho ato, manome izany foto-kevitra izany ihany i Microsoft ao aminny Office 2013. Mazava ho azy, ny hany fiovana no tsy ny fisehony, fa ny fanavaozana marim-pototra maro entinny sary dia mariky ny fiovana mahery vaika anny Office. Ny Office 2013, izay mifanaraka aminny interface Metro, dia mamita ny Metro UI.
Office 2013, izay mampiasa computing cloud, izay miha malaza isanandro, dia mahazo tombony matetika aminity rafitra ity. Ho azonao atao izao ny mampifangaro ireo rakitrao aminny Windows Phone 8, mizara azy ireo aminny alàlanny rahona sy fifanakalozana rakitra. Ho fanampinizay, Microsoft koa dia mampiditra fampiasana mahomby kokoa ny rafitra SkyDrive ho anireo mpampiasa azy. Azo atao ny mampiasa Office 2013 aminny fitaovana mikasika, raha jerena ny solosaina takelaka atsy ho atsy Microsoft, Surface. Ireo fitaovana mikasika dia nidina ihany koa ho anny Office 2013, izay nandroso taminny famolavolana. Ireo mpampiasa mampiasa fitaovana mikasika dia afaka mifehy ny lozisialy Office aminny fomba tsara indrindra.
Raha fintinina dia hiaina traikefa aminny Office tena tsara ianao aminny Office 2013. Ny rindrambaiko Office, izay manana endrika mora, tsotra, malefaka ary ilaina, dia nihatsara be taminny Windows 8.
Sintomy ny Microsoft 365 fa tsy ny Office 2013
Office 2013 dia misy ny Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013 ary ny Outlook 2013. Manoro hevitra ireo mampiasa ny programa Office 2013 hifindra ao aminny Microsoft 365 i Microsoft.
Inona no Vaovao aminny teny ao aminny Microsoft 365
Ampitomboy ny fanoratanao: Avadiho ho rakitra tsara tarehy tsy misy fotoana fohy ny pejinao banga miaraka aminny fitaovanny Mpikaroka sy Editor.
Miaraha-miasa aminny rehetra, na aiza na aiza: Asao ny mpampiasa hafa hanova sy hanome hevitra, hitantana ny fidirana ary hanaraka ny famoahana.
Tazomy miaraka aminao ny Word: jereo ary amboary ireo rakitrao any am-piasana, any an-trano, na eny am-pandehanana miaraka aminireo fampiharana finday.
Vaovao foana: Mahazoa fiasa vaovao sy fanavaozana fiarovana tsy misy afa-tsy aminny Word ao aminny Microsoft 365.
Inona no Vaovao ao aminny Excel ao aminny Microsoft 365
Jereo mazava kokoa ny angon-drakitrao: mandamina, maka sary an-tsaina ary mahazoa hevi-baovao avy aminny angon-drakitrao mora kokoa noho ny teo aloha miaraka aminny fiasa vaovao matanjaka.
Miaraha miasa mora foana: Miaraka aminny 1TB anny fitahirizana rahona OneDrive, azonao atao ny manohana, mizara ary mpiara-manoratra boky fiasana aminny fitaovana rehetra.
Tazomy miaraka aminao ny Excel: mandinika sy manova ireo rakitrao any am-piasana, any an-trano, eny am-pandehanana miaraka aminny fampiharana finday Android, iOS ary Windows.
Vaovao foana: Makà fiasa vaovao tsy manam-paharoa sy fanavaozana ny fiarovana izay tsy misy afa-tsy aminny Excel ao aminny Microsoft 365.
Inona no Vaovao ao aminny Outlook ao aminny Microsoft 365
Mifantoha aminny zava-dehibe: Ny Inbox mifantoka dia manasaraka ny mailakao manan-danja indrindra mba hahafahanao mijery akaiky ireo fisongadinana.
Ataovy eo am-pandehanana hatrany i Outlook: araho ny mailakao ary avereno jerena ary alamino ireo miraikitra na aiza na aiza aminny fampiharana finday mahery vaika.
Vaovao foana: Makà fiasa vaovao tsy manam-paharoa sy fanavaozana ny fiarovana izay tsy misy afa-tsy aminny Outlook ao aminny Microsoft 365.
Inona no Vaovao ao aminny PowerPoint ao aminny Microsoft 365
Mamolavola ary asehoy am-pahatokisana: ny fitaovana famolavolana nohatsaraina dia ahafahanao mamorona hetsika mihetsika ary mamelona ny dianao aminny tsindry vitsivitsy.
Miaraha miasa mirindra: Miaraka aminny 1TB fitahirizana rahona OneDrive, azonao atao ny manohana, mizara ary miara-manoratra ny famelabelaranao aminny hafa.
Ampiasao ny PowerPoint na aiza na aiza misy anao: Avereno jerena sy amboary ny rakitrao ao aminny birao, trano na aiza na aiza misy anao aminny fampiharana finday.
Vaovao foana: Mahazoa fiasa vaovao tsy misy afa-tsy ao aminny PowerPoint miaraka amini Microsoft 365 ihany.
Office 2013 Specs
Haben'ny rakitra: 0.48 MB